बलिउड नायक सलमान खान आइएसआइएसका एजेन्ट ! उनको हत्या गर्ने मिति तय – ZoomNP
बलिउड नायक सलमान खान आइएसआइएसका एजेन्ट ! उनको हत्या गर्ने मिति तय प्रकाशित मिति: आइतवार, पौष २४, २०७३ समय - १२:३४:१० बिग बसको १० औं संस्करणको सबैभन्दा चर्चित प्रतिस्पर्धीमा स्वामी ओमजीको नाम आउँछ । बिग बसका अन्य सदस्यसँग उनको लगातार विवाद हुँदै आएको छ । आफूलाई भारतीय संस्कृतिको समर्थक र पोषक बताउने स्वामी ओमका विभिन्न चरित्र बिग बसमा हेर्न पाइयो ।
ओमजीले सलमानलाई २८ जनवरीमा सलमानको हत्या गर्ने धम्की दिएका छन् । उनले सलमानलाई मार्नुका साथै बिग बसको घरमा आगो लगाइदिने धम्कीसमेत दिएका छन् । उनी भन्छन्, ‘मैले सलमान र बिग बसले चाहे जसरी अभिनय गरेको हुँ,’ बिगबसमा आफ्नो चर्तिकलामाथि ओमजीले भने, ‘मैले कहिले पनि कसैलाई दुःख दिने, जिस्काउने गर्दिनँ ।’ सलमान र बिग बसले भारतीय संस्कृतिलाई बर्बाद गरिरहेको उनले आरोप लगाए । त्यसकारण बिग बसलाई बन्द गर्नुपर्ने उनको माग छ । उनले भने, ‘म बिग बसको घरमा जाने बित्तिकै हाम्रो सबैकुरा खोसियो र उनीहरुले भनेको नमाने हाम्रो हत्या गरिदिने धम्की दिइयो । श्रोत रातो पाटी